I-Cal Poly: I-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukungena
I-Cal Poly San Luis Obispo iyona ekhethekileyo kwizikolo zase- California State University . UCol Poly uyamkela ngaphantsi kweyesithathu kwezo zonke izicelo. Bonke abamkelwayo banokukhuphisana kuwo onke amajelo kwaye kufuneka uvakalise enkulu xa ufaka isicelo sakho.
UMTHETHO okanye i-SAT Amanqaku asetyenziswayo kwinkqubo yokukhetha. Kufuneka ube neklasi ngebanga le-C okanye ngaphezulu kwiikhosi ezifunekayo, eziquka isiNgesi, i-Algebra, iJometri, i-Advanced Math, uLwimi ngaphandle kweNgesi, uLwazi lweNzululwazi (ubuncinane ngonyaka woNzululwazi weBioological kunye nonyaka omnye weSayensi yeNzululwazi), uLuntu IiNzululwazi, UbuGcisa boBuchule bokuBonakala, kunye neElection.
Iipesenti ezingama-50 zabafundi ababhalisile bokuqala babenomlinganiselo wokwenziwa komThetho we-ACT ukususela ngomhla wama-26 ukuya ku-31, ukufunda kweSAT okubalulekileyo ukusuka ku-560 ukuya ku-660, kunye ne-SAT Math ukusuka ku-590 ukuya ku-700.
Unokulinganisa njani kwiCol Poly? Bala amanani akho wokungena kwesi sixhobo samahhala ukusuka kuCappex.
I-Gramissions ye-Admissions yeCal Poly San Luis Obispo
I-Cal Poly GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukuba kwamkelwe. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Kwigrafu, amachaphaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye aluhlaza amele athathe abafundi. Njengoko idatha ibonisa, uninzi lwabafundi abangena kwiCal Poly, ubuncinane ubuncinane be-B +, umlinganiselo we-SAT (i-RW + M) ngaphezulu kwe-1100, kunye nemilinganiselo ye-ACT engama-22 okanye ngaphezulu. Amathuba okungeniswa aphuculwe njengoko ezo manani zikhuphuka. Qaphela ukuba phakathi kwegrafu kukho ininzi ebomvu efihliweyo emva kwayo yonke eluhlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka. Abanye abafundi abanamabanga kunye namanqaku athile ekujoliswe kuCal Poly basenakunyuswa. Kwiphepha le-flip, abanye abafundi abanamanani angaphantsi kwesiqhelo bavunyelwe.
Ngaphandle kwabafundi be-EOP, inkqubo yeYunivesithi yeNyuvesi yaseCalifornia ayifuni abafundi ukuba bathabathe iincwadana okanye intliwano-ndlebe, ngoko ke umahluko phakathi kokwamkelwa nokugatywa ngokuqhelekileyo kuhla kwiimeko ezinjengeemvavanyo zakho, amabakala, ukulungiswa kweekholeji, ukhetho oluphezulu kunye neendawo . Izikolo zaseCal State zihlala zifuna ukukhetha abafaki bezicelo, kwaye ezinye iigrama zikhutshwe kakhulu kunabanye ngenxa yobuncwane nabasebenzi. Kwi-front front academic, inzima kakhulu irekhodi yakho yesikolo esiphakeme , ngcono.
Ukuze ufunde kabanzi malunga neCol Poly kuquka nezinga lokugqweswa kwezifundo, izinga lokumkela, iindleko kunye nedatha yenkxaso-mali, qi niseka ukuba ufunde iPal Poly Admissions Profile
Ukuba Uthanda iCol Poly, Unokuthi uthanda ezi zikolo
Ukuba ukhangele inzululwazi yesayensi okanye ubunjineli eCalifornia, qiniseka ukuba ujonge kwiYunivesithi yaseStford , u- UC Berkeley , iCalTech kunye ne- UCSD . Qaphela ukuba zonke ezine zala maziko zifumana ibha ye-admissions ephezulu kuneCal Poly. I-Stanford, eqinisweni, ilungile apho kunye neHarvard njengenye yeyunivesithi ekhethwa kakhulu kwilizwe. Ngakolunye uhlangothi lwelizwe, i-MIT ibonisa enye yezona zikolo zononophelo zezona zobunjineli kwihlabathi.
Ngesikolo esincinane esikhethiweyo, iYunivesithi yaseCalifornia Polytechnic e-Pomona yinto ekhethekileyo.
UkuLawulwa kunye nokuLinda uLwazi lweeNkcukacha zePal Poly
Idatha yokuLawulwa nokuLinda uLuhlu lweCal Poly eSan Luis Obispo, eCalifornia. Iinkcukacha ngokukhawuleza zeCapepex
Ukuba siza kugweba ngokusekelwe kwigrafu phezulu kweli nqaku, siza kugqiba ekubeni i-"A" yezinga eliphakathi kunye nelasezantsi le-SAT okanye i-ACT izikolo ziza kubakho ekwamukelweni kwincwadi evela kwiCal Poly. Xa sihlutha iindawo eziluhlaza okomhlaza kunye nolwazi oluhlaza okwamaphepha afumanekayo abafundi, kunjalo, sibona umfanekiso ophantsi kakhulu.
Abafakizicelo abaninzi abaneemigangatho kunye namanqaku okuhlolwa asemgangathweni okujoliswe kwiCal Poly ayanqatshwa okanye abhalisiwe. Ngoko kutheni umfundi onamabanga afanayo kunye namanqaku okuvavanya njengomfundi owamkelekileyo anganqatshwa? Kwiimeko ezininzi, kuya kuba ngenxa yekharityhulam yesikolo esikolweni esiphakamileyo. I-Cal Poly ifuna ukubona amabakala anamandla kwiinkalo ezinzima kakhulu ezikhoyo - Ukubekwa phambili kwi-IB, i-IB, i-Honours kunye neeklasi zokubhalisa ezimbini kunye neekholeji. Bakuthanda ukubona abafundi abaye bathabatha inzululwazi kunye nezibalo ngaphezu kweemfuno zabo ezincinci.
Xa kuziwa kwiimilinganiselo ezingenakubalwa, imisebenzi yee-extracurricular inokudlala indima kwinkqubo, nangona ukungeniswa kungagqibekanga. Iingqinisiso zesicelo , udliwano-ndlebe kunye neencwadana zinconywa azibandakanyi inxaxheba kwizigqibo ezivunyelweneyo.
IYunivesithi yaseRhode Island iGPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Izixhobo zoMculo eziprintiweyo
Indlela yokuLahla i-Knuckleball
Yintoni iFSU Imele?
IYunivesithi yaseMaryville yase-Saint Louis Admissions
UkuCamngca kweGiological: Indlela yokuSebenza kweeNkcazo ezininzi